Usuku My Pet » Indlela A Woman Online - Ngombono A Woman sika
Indlela A Woman Online - Ngombono A Woman sika
Ngaphambi I kushada Ngakubona share yami fair ukuphola online, kuhlanganise e-mail amaningi avela suitors ezingase zibe online. I ngempela uthole ukubona okuhle, the bad and the ugly. Futhi engiye uzwakale abaningi nezintombi zami mayelana nakho kwabo of ukuphola online. Lesi sihloko ifingqa lokho isebenza kahle e-mail ngowokuqala owesifazane futhi yini eyenza igazi lethu run amakhaza futhi izandla zethu hit SUSA ngaphambi kokuphela ndima!
Ingabe enobungane - Kuzwakala esobala futhi Uzomangala bangaki amadoda ukhohlwe lokhu lapho uthumela ukuvulwa e-mail yabo. Kuba sengathi ingxenye enengqondo wesilisa zobuchopho ithatha phezu futhi bafuna ukuthola ilungelo ibhizinisi (ukhuluma ocingweni / dating noma ngisho sex). Ngeshwa thina besifazane azisebenzi ngaleyo ndlela. Sithanda ukuba agcobhoze uzwane yethu futhi sibone indlela esizizwa ngayo uqala. Sithanda ukuba romanced futhi uhlangabezana ingxoxo enobungane nokunaka kuwe. Cabanga ngakho njengendlela 'ukufudumala us up' uma uthanda. Evulekile nge nobungane Always, enkhulumeni e-mail (hhayi isikhathi eside khulu) futhi uyothola izimpendulo eziningi more.
Ingabe uyigcine ukukhanya futhi ezithakazelisayo - Kukhona ukulingana phakathi ezithakazelisayo / ukunakwa washo futhi off the wall / off-ngokubeka. Ngiyazi ukuthi ungezwa sengathi ingcindezi uma uzama ukubhala ukuvulwa omuhle e-mail. Iseluleko best I anganika ukuba wena. Funda isigaba ngezansi indlela yokugwema nesidina futhi nazi ezimbalwa tips ngawe akusize uzinikele njengoba ezithakazelisayo futhi mtshele ukuthi nibaluleke siphendula. Funda profile yakhe ngokucophelela futhi aphawule into uthola khona. Hlobanisa it emuva into wabona uma kungenzeka ukwakha uxhumano. Izincomo umsebenzi enikeziwe kahle awayona ngokweqisa futhi ziyiqiniso. Enye kunconywa encane nice for a e-mail lokuqala. Ungase futhi ukukhuluma ngento kuye kwenzeka kuwe osukwini lwakho, into ebonisa ukuthi kancane ungubani. Uma umfana funny uzizwe ukhululekile ukusebenzisa amahlaya kancane, nje Ungeqisi it. Amahlaya Dry kalula kabi nge e-mail. Abesifazane ukuxhuma ngokusebenzisa imizwelo futhi wabaxoxela okuhlangenwe nakho, futhi uma ungakwazi ukwakha uxhumano naye wena indlela isigamu khona.
Ingabe uyigcine short - Nakuba sifuna ukuba nobungane futhi kumnandi asifuni indzaba. A lonke ikhasi nokubhala cishe usithumelele ukulala uma sifunda nhlobo, Nokho riveting kungase kube. At umhlabeleli singase ngalo wayifunda futhi sizobe ukwahlulela uyazibuza uma self elihlanyiswa lapho sivula e-mail ukubona lonke ikhasi lokubhala! e-mail yakho idinga ukuba ibe kufinyeleleke futhi kulula ukuze sizifunde, okusho short nokunaka Esephethe. Hamba for izinga phezu eliningi. A ambalwa izigaba short futhi impactful kanye kunconywa iyindlela impumelelo.
Ungabi isidina - Kulungile Ngiyaqaphela kungaba nzima ukwazi ukuthi yini ukusho, kanjalo ngiya ukukunika umbhangqwana Amacebo esheshayo. Boring libhala uhlu Izinto ngawe ezifana izici yakho, noma ukuthumela umyalezo othi nje iyicele ukuthi ungu- up for ukukhuluma kungabikho olunye ulwazi. Uma engayikhokhi uthole banomuzwa for ubuntu bakho kusukela e-mail yakho ngeke ukwazi ukuthi efuna ukukhuluma nawe. Futhi kanjalo siyobona nje Ungazihluphi ukuphendula. Ufuna wakhe ukuba wazizwa ephoqelekile ukulobela emuva. Musa nje kabusha iphrofayli yakho, siyobona funda ukuthi uma unesithakazelo.
Ungabi cheesy - Amadoda amaningi ngeke overcompensate futhi sizikhandle sizama. Lokhu kungaba ibukeke kuka-ukusetshenziswa izincomo kanye / noma amahlaya, futhi njalo kuza off at best njengoba cheesy, futhi neze njengoba yenza ngokuphelelwa yithemba. Bhala kuye sengathi ukhuluma nomngane female, zokuvimbela ekubeni too loluhlelekile ukuwela isethi engqondweni ngizama kanzima ukuze wakhe cindezela. Sebenzisa amahlaya izincomo kodwa kancane. Like nje usawoti kwenza ukudla kangcono kuhle kuphela uma mbalwa, isimiso esifanayo siyasebenza lapha.
Musa bhala yonke izidingo zakho - Ngezinye izikhathi amadoda ngeke uhlu zonke izinto bafuna in owesifazane ukuthi e-mail lokuqala. Futhi ngezinye izikhathi ngeke uhlu zonke izici ukuthi asifuni (cringe - nakakhulu!) Lokhu kuza off njengoba eqinile futhi ziyophenduka owesifazane abandayo. Yena akunakwenzeka ukuba aphendule uma nenza lokhu.
Musa Slag off abanye besifazane wahlangana online - Ngokudabukisayo lokhu futhi kwakuvamile ukuphola izinsuku zami online, futhi njalo wangibuyisela kubanda. Kuyinto ungakhululekile kakhulu owesifazane ukulalela umuntu slagging off omunye wesifazane yena walotshwa. In the ezingqondweni zethu uyazibuza uma sihlanganyela nxi yakhe futhi kusenza sizizwe on tenderhooks ezibuza uma njengoba ukwahlulela kwethu ngokuba njengoba kwakunjalo lapha. Gwema lokhu like the inhlupho.
Ungakhulumi sex in the e-mail lokuqala! - Ngiyaqonda ukuthi uma uthola owesifazane ekhangayo ucabanga ngokomzimba, futhi akukho lutho olubi kulo. Kodwa thina besifazane sensitive kakhulu ngenxa wasondela nje ocansini. Kwabesifazane abaningi abasebenzisa i-inthanethi dating site, lokhu akusona isizathu primary singabantwana khona, sifunani dating kanye / noma a life partner. Ngiyazi kunjalo for iningi amadoda esizeni dating too, futhi ngeshwa kukhona abantu abaningi akhona nje ngoba ufuna wabeka. Futhi radars zethu ngozwelo luthungatha ukuthola lawo madoda. Sizokwenza yisihenqo ngokushesha kakhulu, kanjalo ugweme eyathi omunye 'lawo madoda'. Gwema nginikhumbula yini ngokocansi e-mail yakho yokuqala. Ngiyazi ukuthi kukhona iseluleko phandle lapho besilisa 'eyolanda abaculi' okusho ukhuluma ngokwakha yokukhuphuka ukungezwani ngokocansi, lalokhu kuyisithelo sonke kuhle, Nokho ngombono wami kungaphumeleli ukuphola online. Okungenani kuphela wezemiSebenzi uma kwenziwa ngendlela ethile. Senzo Fun muhle kabi, kodwa ngeke alenze nokuthi sigaba uma uye ocansini yonkana kakhulu yezokuxhumana yakho yokuqala. To us besifazane kuba ezikhohlakele. It uzizwa like a ishothikhathi futhi sikholelwa ungomunye uquqaba uzama lendlela on. Khumbula, isifuna ukuzizwa ekhethekile. Sebenzela ukuxhumana kuqala, ke senzo ezinye mnene.
Ngaphezu kwakho konke uthole ingqondo yakho wokulungisa - Angase abe osezulwini, futhi khumbula ungu- nje owesifazane oyedwa kwabaningi. Uma unezinkinga okade nabesifazane inthanethi futhi ukuthola izimpendulo imiyalezo yakho, sibheke ingqondo yakho usethe kuqala. Ingabe uzizwa ngokuphelelwa yithemba? Ingabe ubeka wonke amathemba akho zibe munye e-mail uma uthumela it? Uma kunjalo lokhu Kuyozwakala the e-mail ngibeke abesifazane off. Umsebenzi on ukuthembela kwakho nengqondo kangangokuthi wazi ziningi izinto for wena. Dates yakho uyokuza umphumela yimuphi 1 e-mail akubalulekile. Lokhu ngeke babe uyakwazi ukuthumela fun, kuhlanganyele futhi ukukhanya imiyalezo onenhliziyo ethandayo ukuthi uzothola impendulo omuhle.
10 Tindlela tekwakha A Bodacious bachelorette Pad!
Yini Women Think About Ngesikhathi Sex
Indlela Get Over Online Dating Bumps